शेयर बजार पुन: १३०० को मनोवैज्ञानिक क्षेत्रतिर, के होला अब?
काठमाडौं, वैशाख २९ : सवा १२ बजेतिर १२८४ दशमलव १७ को विन्दुसम्म बजार पुगे पनि त्यसपछि भने बजारले सकारात्मक प्रवृत्ति समातेको थियो। अन्तिम समयमा खरिदकर्ताको निकै राम्रो उपस्थिति हुँदा बजार आज उच्च विन्दुमा नै बन्द भएको छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘इण्ट्राडे हाई’ पनि भनिन्छ।
इण्ट्राडे हाईले अर्को दिनको पहिलो घण्टामा बजार सकारात्मक प्रवृत्तिमा हुने देखाउँछ। शिवम् सिमेण्टमा लगानीकर्ताको विशेष चासो देखिएसँगै आज पनि उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचकमा राम्रै वृद्धि देखियो भने होटल उपसूचकमा सर्वाधिक वृद्धि देखिएको छ।
साताका पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ०७ ले वृद्धि भएर १२९५ दशमलव ०३ को विन्दुमा पुगेको छ। आज दोस्रो बजार परिसूचकमा ० दशमलव २४ प्रतिशतकोे वृद्धि देखिएको छ। आज दोस्रो बजार १२९१ दशमलव ९६ को विन्दुमा खुलेको थियो भने १२९५ दशमलव ०३ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो।
आज बजारको न्यूनविन्दु १२८४ दशमलव १७ थियो। आज दिनभरमा ८४ करोड ७६ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज पनि सानिमा बैंकको १६ करोड ४५ लाख बाराबरको प्रमोटर शेयर किनबेच भएको छ।
आज सबैभन्दा धेरै सानिमा बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयर किनबेच भएको छ। सानिमा बैंक लिमिटेडको १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर किनबेच भएको छ।
आज शिवम् सिमेन्ट्सका शेयरधनीले सर्वाधिक ९ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमाए भने सुर्योदय लघुवित्तका शेयरधनीले सर्वाधिक ७ दशमलव २६ प्रतिशतले गुमाए। केही समयदेखि शिवम् सिमेन्टमा लगानीकर्ताको निकै धेरै चासो देखिएको छ।
–वैशाख २७ गते शुक्रबारबाट दुई लघुवित्तको आईपिओ निष्काशन हुँदैछ। जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वाभिमान लघुवित्तले शुक्रबारबाट आइपीओ बिक्री गर्दै छन्। दुबै कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि आवेदन दिन सकिने छ। दुबै कम्पनीको आईपीओ वैशाख ३१ गते बन्द हुनेछन् भने सो समयसम्म सम्पूर्ण शेयरमा आवेदन नपरेमा जेठ २६ गतेसम्म समय थप गरिने छ।
–१८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद गरी कुल ४० प्रतिशत लांभाससहितको प्रस्ताव छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वैशाख ३० गते हेटौँडामा बस्ने वार्षिक साधारण सभामा लैजाने छ।
१० प्रतिशत एनआईसी एशिया डिवेन्चर २०८५-८६ सूचीकरण गरिएको छ।
चित्र नं १, नेप्सेको दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्तिले बजारमा क्रेताको चाप कमजोर हुँदै गएको देखिए पनि बजार तल्लो प्रवृत्ति रेखाभन्दा माथि रहेकाले बजार हालसम्म सकारात्मक क्षेत्रमा रहेको जनाउँछ। आजको मैनबत्तीले हतौडा आकृति बनाएको र परिमाणले पनि यो आकृतिलाई समर्थन गरेको देखिए पनि अर्को दिनको मैनबत्तीलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ।
चित्र नं. २, विगत दुई दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई ५ मिनेट समयावधिको मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको निष्कर्ष अनुसार बजारको तत्कालीन प्रतिरोध १२९६ मा रहेको र तत्कालीन टेवा १२८० मा रहेको भनिएको थियो। आज बजार १२९० भन्दा तल झरेपछि १२८४ देखि नै टेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ। हाल बजार सामान्य प्रतिरोध क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
२१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुले गोल्डन क्रस बनाएकाले बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने देखिएको छ। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स ६६ दशमलव ९३ अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले कारोबार दिनको अन्तिम समयमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ। स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले बजारमा शेयर बढी खरिद हुन थालेको संकेत गरेपनि बजार सच्चिहाल्ने देखिँदैन।
माथि उल्लेखित छोटो समयका नेप्से प्रवृत्तिहरु र सूचकहरुको आधारमा चित्र नं. १ मा देखिए बमोजिम यदि बजार माथिल्लो प्रवृत्ति रेखाभन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार अझ सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। बजारको तत्कालीन सामान्य टेवा १२८८ र १२८४ मा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Sunday, 12th May 19:20:29 PM